Unokulungisa izicwangciso zobuso ngoncedo lwe-injection-ubuhle. Basebenzisa iziyobisi ezahlukileyo, kodwa zonke zixhomekeke kwizinto ezifanayo - ezenziwe ngobuncwane okanye ezenziwe nge-biodegradable-ngaphandle kokuba kungabi nzima ukucinga ngoshishino lwangoku. Indlela yokuvuselela isikhumba kwaye ulahle ukuvuvukala phantsi kwamehlo, kunye nokunye okungakumbi - kwinqaku lethu.
Yintoni le? I-synthetic biopolymers - isiseko sezinto zokulungiselela amalungiselelo eplastiki, kubonakala kwiimarike. Ngoku sele zisetyenziswa kakhulu. Amalungiselelo athandwayo: i-Biopolimero-350, i-Silikon-1000, i-AdatoSi 1-500, i-Bioplastic. Inkcazo nomgaqo wokusebenza: zijojowe phantsi kwesikhumba kunye neempawu ezichanekileyo ngenxa yokuba sebudeni. Musa ukubola kwaye ungagqibeli, hlala emzimbeni womntu ubomi. Ngoko ke, kunokukhokelela kwimiphumo emibi. Qaphela: unako ukudibanisa - ujikeleze i-capsule ehleliweyo. Ngaphandle, oku kubonakala njengamatywina, ukungafihli komhlaba, isifo sobuthakathaka nokubunjwa kwesikhumba. Kulo mmandla, awukwazi ukungena nasiphi na izidakamizwa zemihla ngemihla, ezigqityiweyo ekugqibeleni kwiziqendu zesermeme. Ngaphandle koko, unokukhupha ukutshintshwa kwento ehlanganisiweyo - iya kuqala ukufuduka kwiishubhu, ziwagubungele. Amanyathelo akwazi ukukhipha. Kodwa ukuba umntu lowo athe waziswa kumntu, kwaye kufuneka ahlaziye ezinye iindawo, inokwenziwa kuphela ngeendlela ezifanayo.
YINTONI? Umhlaza wendalo wesikhuni. Ekuqaleni, icandelo lafunyanwa kwiintaka zeentaka, kwaye i-biotechnologies zazisetyenziselwa ukuveliswa kwayo. Inye kuphela into efana nayo yonke into-kokubili kubantu nasezilwaneni (xa isetyenziselwa ukuxhatshazwa kwe-antigenic constituents). Izidakamizwa ezigqithisileyo: isilwanyana sokuqala esisekelwe kwi-hyaluronka yayingu-Restylane-iyaziwa kakhulu kwaye ivivinywa ngexesha (kwiimarike - engaphezulu kweminyaka eyi-15). Inkcazo nomgaqo wesenzo: ukungabi nendawo ye-acaluronic acid idibaniswa ne-age-related relation of the skin, ukulahleka kwe-elasticity kunye nokubonakala kwemibimbi. I-Hyaluronic acid isetyenziswe kwiplastiki ye-contour, i-biorevitalization, i-mesotherapy. Ngendlela yayo ecocekileyo (isetyenziswe kwimotherapy) iyahlukana kwesikhumba ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Ngama-plastiki, i-gelgragrading gels esekelwe kwi-acid ye-hyaluronic ekhethiweyo ikhethwayo - ihlala ihlala kwiderm. Emva kokugaya i-injection, ukuhlukana, i-hyaluronka ihlahlela emanzini kunye ne-carbon dioxide, kwaye kwindawo yokuxela, inani leemodyuli zamanzi landa, okwenza umthamo kwaye "uqhube" umxhaka phezulu, uphucule ukukhutshwa kwesikhumba. Qaphela: imeko esemgangathweni yesiphumo esihle kwaye ukungabikho kwemiphumo emibi kukusungulwa kobugcisa.
Yintoni le? I-collagen yengulube, icandelo lesilwanyana. Izidakamizwa ezidumile: "I-Collost", iZyderm, iZyplast, Resoplast, iCosmoplast. Inkcazo nomgaqo wesenzo: iziphumo zeelagi ze-collagen zihlala zide (iiinyanga ezi-6-8, ngamanye amaxesha unyaka omnye). Nangona kunjalo, ngokungafani ne-hyaluronic acid, i-collagen ayibandakanyi umngcipheko wokugatywa. Isizathu sivela kwisilwanyana. Yaye ukuba le nkunkuma ayifanelekanga - umzimba uphendukela ngokuthe ngqo kwizinto zangaphandle, kuba i-collagen ayikwazi ukuhlanjululwa ngokupheleleyo. Kule meko, iya kulahla iipropati zayo. Nceda uqaphele: i-collagen ingabangela ukusabela okuthe tye, ngoko malunga neenyanga ngaphambi kwaye ukusetyenziswa kwayo kuqhutyelwa rhoqo ngovavanyo oluthile
Yintoni le? Kwigama elithi "inxinxu ye-botulin" ibonisa: enyanisweni, yinto enobuthi umntu afunde ukuzisebenzisa. Isisombululo senziwa ngenxa yezinto ezibalulekileyo zebhakteria ze-botulism. Emva kokuba i-botulotoxin isetyenziswe ngokunyanga kumayeza kwonyango lweengxaki zegazi, ukukwazi ukulwa nokuxubana kwemigudu kwafunyanwa. Iziyobisi ezidumile: i-Botox, iDysport, esekelwe kwi-toxin ebuthakathaka ye-botulism kwiindawo ezithile ezihlolwayo. Inkcazo kunye nomgaqo wokusebenza: uqaliswa kwiindawo zokubunjwa zobuso buso (ebunzini, emmpumlo, ematyeni, "ezinyaweni zeenyawo") kwaye ibimbela ukutshatyalaliswa kwemizwa yesifo. Imisipha ayifumana iimpawu ezibangela ukuba baqeshwe. Indawo apho umlenze ukhona khona, okwethutyana ukuyeka ukuhamba ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza uphononongo. I-toxin ye-Botulinum inceda ukujamelana nezo zibambano kuphela, izizathu zazo ezenza umsebenzi wazo. Qaphela: imali esekelwe kwi-toxin ye-botulin ingaba yinto engenakuncedo (ngokukodwa, xa i-antibodies ikhona emzimbeni womntu, ugonyo lokulwa ne-botulism lwenziwe). Kodwa iimeko ezinjalo namhlanje zihlukile.
Yintoni le? Icandelo elikhishwe kwimbungu yezinyo lemvu. Izidakamizwa ezidumile: i-Radiesse, i-Atlean. Inkcazo kunye nomgaqo wokusebenza: ekuqaleni, iifom e-calcium-based based formulations yasetyenziselwa urolo kwaye yayilungileyo. Ukuxhamla kweziyobisi nge calcium kukuba bangaphakathi kwendawo yejoyiko, oko kuthetha ukuba utshintsho oluneeminyaka alukhumbuzi ixesha elide. Nceda uqaphele: ngexesha lokuguga ngokwemvelo, kunokubakho ukungabonakali kwemimandla apho iilenki zenziwe khona, kunye neendawo ebusweni apho kungenziwa khona iinkqubo. Akunakudla ngokusetyenziswa.
Impembelelo yendalo kwesikhumba
Iindlela zokuphathwa kwesikhumba sengxaki ebusweni
Ungayinqumla njani iinki?
I-Vitamin E ebusweni besikhumba
Amandla omlingo wezinyosi: intsha ye-Guerlain yecala lase-Abeille Royale
Kutheni amantombazana ezama ukuhlala ehle?
Jam kusuka kwiidiza
Eyona nto ihamba kakuhle emakhanda
Ukuhlanganiswa kwegrey ephakathi
Burger ngee-peas peas
Ukufunda ukunika izipikili isimo esihle
Andifuni ukutshata, ndingakuphepha njani uxinzelelo lwentsapho?
Iibhinki zaseTshayina kunye nenyama
I-Green Ground yeKhofi yoLungiso lokuTyekela
Ungasusa njani ilitye emlenzeni?
Yintoni eyingozi yowesifazane ulonwabo?
Ubunkokheli bendabuko yintlondlo yesibini okanye ingxaki yobomi bonke?